Ihe kacha mma nke Ekwedọọ: Pailón del Diablo | Akụkọ Njem
Enric Gili | | Atụmatụ, Ecuador, General, Ihe ị ga-ahụ, Quito
El Pailón del Diablo (eze Cascada del Río Verde) bu mmiri mmiri nke Osimiri Pastaza nke di na Ecuadorian Andes di nso na obodo Baños de Agua Santa, n'ókè nke oke ọhịa Ecuador.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa njem nleta na-adọrọ mmasị na Mpaghara Tungurahua (ma n'ezie na South America niile) nyere ọdịdị ya dị egwu, ịdị nso ya n'okporo ụzọ awara awara na elu ya karịa 80 mita.
O sitere n’aha ya na myirita nke nkume nwere iru ekwensu, nke esiri n’otu n’ime akwa ya.
Ọ bụrụ n ’izu ole na ole gara aga, agwara m gị maka njem dị mkpa n’Ekwedọọ (Ogige Ntụrụndụ Cotopaxi na ugwu mgbawa), Pailón del Diablo ga-abụ ihe ọzọ. Zọ ọ bụla a na-atụgharị azụ (ma ọ bụ na ọ bụghị) site na mba Andean ga-agabiga n'obodo Baños de Agua Santa na gburugburu ya (iyi mmiri, ugwu mgbawa, oke ọhịa na ọdịdị pụrụ iche).
1 Kedu ka esi enweta mmiri nsụda mmiri Pailón del Diablo?
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na nsụda mmiri Pailón del Diablo?
Kedu ka esi enweta mmiri nsụda mmiri Pailón del Diablo?
Ọnụ ụzọ nke nsụda mmiri dị dị nnọọ nso n'okporo ụzọ jikọtara Baños de Agua Santa na obodo Puyo, nke dịbu n'etiti ọhịa Amazon, na ihe dịka 20 kilomita site na obodo mbụ.
N'iburu nso a, ọ dị mfe ịnweta ya, n'adịghị ka ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na Ecuador, enwere ike ịnweta Pailón del Diablo naanị n'okporo ụzọ, enweghị ụgbọ oloko.
Getga Baños de Agua Santa ma ọ bụ Puyo, ihe kachasị mma bụ ime ya na bọs nke ọrụ njem ọha na Ecuador. Usesgbọ ala kwa awa jikọrọ Ambato na Latacunga (na Andes) ya na obodo ndị nwere ebe okpomọkụ.
Ozugbo in Baños, ị nwere ike iru n'ọnụ ụzọ nke ogige ahụ:
Site na bọs ọha: ma ọ bụ site na Baños ma ọ bụ site na Puyo. Offọdụ ụgbọ ala na-akwụsị n'ụzọ ziri ezi n'ọnụ ụzọ elu nke nsụda mmiri (enwere ọnụ ụzọ 2). Ndị ọzọ na-akwụsị n’etiti okporo ụzọ ma ha dị ezigbo nso n’ebe e si abanye n’okpuru. Ha na-eme okporo ụzọ ahụ na mpụga ma na-alaghachi ma nwee oge ana-anabata, oge ọ bụla enwere ọtụtụ ụgbọ ala.
Na tagzi: n'ezie nhọrọ kachasị ọsọ kamakwa nke kachasị ọnụ. Ihe dị ka minit 15 ị rutere Pailón del Diablo site na etiti Baños. Ọ bụrụ na anyị họrọ nhọrọ a, ọ ga-adị mma ka anyị kwụọ ọnụahịa njem ahụ nke ọma ma mee njem nlọghachi site na tagzi ọzọ ma ọ bụ site na bọs.
Cygba ígwè. Nhọrọ a bụ otu n'ime ebe nkiri mpaghara ahụ na-enye ndị njem nleta: mee njem dum n'okporo ụzọ gaa Puyo site na igwe kwụ otu ebe ma kwụsị na nke ọ bụla mmiri mmiri na-aga n'okporo ụzọ. N’echiche a, achọrọ m ịgwa gị ọtụtụ ihe. N’otu ụzọ, n’agbanyeghi na emeziri ya nke ọma, o nwere okporo ụzọ dị elu ma nwee ọwara dị n’ụzọ ahụ. N'aka nke ọzọ, site na Baños ruo Puyo, mkpọda ahụ na-agbadata mgbe nile, ma ụzọ azụ bụ ugwu. N'ikpeazụ, rịba ama na ebe dị n'etiti obodo abụọ ahụ bụ ihe dị ka kilomita 30 ma ọ bụ 40. Ọ bụrụ na ịchọrọ ileta nsụda mmiri dị n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè, buru nke a n'uche. O doro anya na nke kachasị bụrụ eziokwu bụ ịme ụgbọ ala na ịgbago na bọs ma ọ bụ tagzi-4 × 4 na-anabata ịnyịnya.
Site na ahụmịhe m, ana m akwado ka ịchọọ ebe obibi na Baños ma nwee ọ theụ niile ụzọ na nhọrọ nke oke ọhịa Andean na-enye site na obodo a maka ụbọchị 2. 1 otu ụbọchị ezughị, njem mmụta na nsụda mmiri a chọrọ ụbọchị dum ma ọ bụrụ na emere ya n'akụkụ abụọ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na nsụda mmiri Pailón del Diablo?
Dị ka m kwuru na mbụ Enwere ike ịnweta ogige ahụ site na akụkụ ala nke nsụda mmiri ma ọ bụ site n'akụkụ elu. Agbanyeghị na ọnụ ụzọ ahụ abụchaghị n'efu (ruo n'ókè ụfọdụ ọ dị, dịka ọmụmaatụ akwa nkwusioru mbụ, site ebe ahụ), Ekwadoro m gị ịme ụzọ abụọ ahụ. Otu anaghị ejikọ na nke ọzọ, n'otu oge enwere ihe mgbochi nke na-ekewa ha. Nyere nhọrọ, m ga-ebu ụzọ mee ụzọ dị ala ma mesịa nke dị elu, echere m na ọ dị ntakịrị karịa.
Ọ bụrụ na anyị emee njem nke dị n'okpuru, anyị ga-ebu ụzọ nwee ọ rainụ mmiri ozuzo Amazon na ịma mma ya niile (nnụnụ, osisi, ala mmiri, ...) n'ikpeazụ ọmarịcha Pailón del Diablo nke dị n'okpuru. Ọ dị ụzọ dị ka ọkara elekere ruo mgbe ị ruru n'okpuru na ọbụlagodi nsụda mmiri ahụ. Enwere ọtụtụ echiche, akwa na akwa mgbago iji tụgharịa uche na nsụda mmiri.
Ọ bụrụ na anyị emee njem mmụta ahụ site n'elu, anyị ga-ebu ụzọ nwee ụzọ dị mkpirikpi na-esote Osimiri Pastaza, nwere obere mmiri mmiri, na ahihia ahihia nke mpaghara ohia. Mgbe nkeji ole na ole anyị ga-emi odude ke elu nke nsụda mmiri si ebe anyị nwere ike ịtụgharị uche na nsụda mmiri dị egwu (ihe dị ka 100 mita nke enweghị atụ). E si ebe ahụ rụọ ọtụtụ àkwà mmiri e ji osisi rụọ bụ́ ndị jikọtara isi ebe dị iche iche nke ugwu ahụ ma jiri nwayọọ nwayọọ gbadaa na ala ala nke Pailón. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ àkwà mmiri na steepụ ndị ahụ n'ụzọ dị mma maka inwe ọ theụ ma ọ bụ see foto. Ọ na-ahapụ onye dara ogbi mgbe ọ hụrụ ya. N'ebe ụfọdụ ọ na-enye ntakịrị vertigo.
Na gburugburu nke nsụda mmiri ị nwere ike ịme ụdị egwuregwu dị iche iche, dịka ọmụmaatụ rafting, rịa ma ọ bụ akara zip. Maka ndị hụrụ adrenaline n'anya, Pailón del Diablo bụ ebe kachasị mma.
Na nkenke, mpaghara Ecuador a (na anyị nwere ike ịgbatị ya na mba ndị ọzọ) bụ ndị ọha na eze na-amaghị ama na obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mma ma maa mma na South America.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Onye kacha mma nke Ecuador: Pailón del Diablo
Zọ ndị njem nlegharị anya maka ndị hụrụ akwụkwọ n'anya